Mourinho: Sidab ha yeesho Manchester United haddii ay dooneyso in ay ka horjoogsato Man City awoodda ay ku haysato England – Gool FM
Kaafi March 17, 2018
(Manchester) 17 Mar 2015. Jose Mourinho waxa uu daaha ka rogay haddii Manchester City sii wado qarashka ay suuqa galineyso in ay adkaan doonto in laga horjoogsado awoodda ay ku haysato Premier League.
Portugal-ka waxa uu daaha ka rogay waxa ay tahay In Man United samesyso si ay u celiso Man City.
Sidoo kale Jose Mourinho waxa uu ugu baaqay xiddiagaha United in ay koraan haddii ay rabaan in ay horistaagaan Man Cty.
Kaddib markii laga soo ciribtiray Champions League-ga, Mourinho 22 daqiiqo oo muuqaal ah ayuu ku difaacay waayihiisa tababarenimo.
Waxa uu sheegay in Pep Guardiola safkii uu dhaxlay aad uga wanaagsan yahay kii uu ugu yimi United halka uu sheegay in £286m ee uu qarash gareeyey ay daruuri u ahayd in ay kula loolamaan City.
Waxa uu yiri: “Haddii kooxaha anaga naga xaaladda wacan, haddii ay joojiyaan in ay qarash suuqa galiyaan anaga aan qarash suuqa galino, ma aha oo galiyo qarash suuqa la galiyo, sidoo kale xog iyo waqti – waan loolami karnaa. Laakiin haddii ay sii wadaa qarash gareynta isla sida hadda ama naga fiican, wey adag tahay , Sidaas ayey u fududahay.
“Waan isku dayyi doonnaa in isla kooxahaas, waa kuwo u diyaarsan in ay guuleystaan. Kooxaha kale uma diyaarsana in ay guuleystaan. Mid waa in aad jiho kale u martaa geedi socodka”.
SPAL SV JUVENTUS: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
Neymar oo ka balan qaaday asxaabtiisa Barcelona inuusan ku biirin Real Madrid, Wuxuuna ku xiray hal shardi oo aad u adag